अब जे आइपर्छ, त्यही टर्छ : प्राश्ना शाक्य, गायिका
Tuesday, 10 Jul, 2018 12:03 PM
‘आवाज देउ’ अर्थात गायिका प्राश्न शाक्य । प्राश्ना भन्नेवित्तिकै ‘आवाज देउ’लाई सम्झिन्छन् दर्शक÷श्रोता । सुमधुर स्वरकी धनी प्राश्नाले दुई सयभन्दा बढी मेलोडी गीत गाइसकेकी छन् । तर, उनका लागि ‘आवाज देउ’ पर्यावाची बनेको छ । त्यसैले प्राश्नामाथि ‘पपगायिका’को ट्याग नै लागेको छ । ‘हाई–हेल्लो’, ‘आवाज’, ‘उड्यन’ र ‘प्राश्ना’जस्ता चार एकल एल्बम ल्याइसकेकी प्राश्नाको अर्को विशेषता ‘जिंगल’ हो । दुई सयभन्दा बढी ‘रेडियो जिंगल’मा स्वर दिइसकेकी प्राश्ना सात वर्ष ‘ग्यापिङ’पछि गायनमा ‘कम्ब्याक’ भएकी हुन् । यिनै प्राश्नासँग सांगीतिक करिअर र जीवनबारे एमपी सुब्बाले गरेको कुराकानी ।
– हालै ‘प्राश्ना’ एल्बम ल्याएकी छु । उक्त एल्बमका सबै गीतको भिडियो बनेको छ । त्यसको प्रमोशनसँगै स्टेज कार्यक्रमहरुमा गाउँदै आएकी छु । एउटा फास्ट ट्रयाकको गीत पनि बनाउँदैछु ।
यो तपाइँको गायनमा ‘कम्ब्याक’ होइन त ?
– हो, म करिब ७ वर्षपछि कम्ब्याक भएकी हुँ । गायनमै निरन्तरता दिँदादिँदै जीवनमा उताव–चढाव आयो । जसले अर्कै मोड लिएपछि संगीत क्षेत्रमा ओझेलमा थिएँ ।
सात वर्षपछि सांगीतिक क्षेत्रको ‘कम्ब्याक’ कस्तो लागिरहेको छ ?
– रमाइलो नै लागिरहेको छ । सात वर्षअघि र अहिले केही फरक पाएकी छैन । दर्शक तथा श्रोताले पनि फेरि आउनु भएको छ । राम्रो भयो भन्छन् । त्यसैले खुसी लागेको छ ।
तपाइँले गाउन सुरु गर्नु भएको चाहिँ कहिलेबाट नि ?
– मैले स्कुल पढ्दाखेरी नै गाउँथे । सानोमा एकदमै नाच्न मन पराउँथेँ । स्टेजमा चाहिँ २०५२ सालदेखि गाउन थालेकी हुँ । त्यसपछि २०५२ सालमा अध्ययन र संगीतलाई अँगाल्छु भन्ने सोचले काठमाडौ आएकी हुँ । अहिले पनि यही नै छु ।
गायन क्षेत्रप्रति कसरी प्रभावित हुनुभयो ?
– त्यही त हो नि । धरानमा हुर्केको । म्युजिक कै माहोल पनि थियो । त्यसभन्दा पनि मेरो बाजे सधै बिहान–बिहान गुन्गुनाउँनुहुन्थ्यो । म पनि बाजेसँगै गुन्गुनाउँथे । ठूली हुँदै गएपछि गायनमै लाग्छु भन्ने सोच आयो ।
तपाइँ साह्रै मीठो सुमधुर गाउनुहुन्छ तर, किन प्राश्नालाई ‘पप गायिका’ भन्छन् ?
– मेरो अरु पनि गीतहरु हिट छन् । तर, ‘आवाज देउ’ एकदमै हिट भयो । जुन पपशैलीको गीत हो । मलाई त्यही गीतले प्राश्ना भनेर सांगीतिक क्षेत्रमा चिनाएको छ । त्यसैले मलाई धेरैले पप गायिका भन्छन् । तर, म सबै प्रकारका गीत गाउँछु ।
पहिले धेरै रेडियो जिंगलहरु गाउनुहुन्थ्यो । अहिले पनि गाउनुहुन्छ ?
– गाउछु नि । सातामा कम्तिमा पनि ६/७ वटा रेडियो जिंगल गाउँदै आएकी छु । एक किसिमले भन्ने हो भने मेरो आम्दानीको स्रोत नै जिंगल हो ।
रेडियो जिंगल गाउँदा राम्रो पारिश्रमिक पाइन्छ हो ?
– पारिश्रमिक पनि राम्रै हुन्छ । साथै छोटो पनि हुन्छ । त्यसैले समय पनि धेरै लाग्दैन । अर्को कुरा गीत सातामा एउटा/दुईटा रेर्कड हुन्छ । तर, जिंगल एकै दिनमा तीन वटासम्म पनि हुन्छ ।
अब जीवनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ला, के सोच्दै हुनुहुन्छ ?
– सोच्दैछु । पहिले पनि मेरो जीवनमा उताव–चढाव आएको हो । यो धेरैलाई थाहा छ । अहिले धेरै नै सोच्न थालेकी छु । आखिर सोचेजस्तो नहुने रहेछ । त्यसैले अगाडि जे आइपर्छ, त्यही ठर्हछ ।
तपाइँको सोचाइमा यस्ता व्यक्तिसँग जीन्दगी अगाडि बढाउँछु भन्ने त आएको होला नि ?
– त्यस्तो केही आएको छैन । एकपटक सोचले फेल खाएपछि सोच्नै छाडेँ । तैपनि जीवन चलाउनका लागि दुवै जनामा अन्डस्ट्रेनिङ हुनपर्छ । जुनै क्षेत्र र पेसाको होस् । त्यसले फरक पार्दैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा अन्डस्ट्रेनिङ नै हो ।